China Iphrinta Ehamba Phambili Ehamba Phambili Emhlabeni China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iphrinta Ehamba Phambili Ehamba Phambili Emhlabeni - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Iphrinta Ehamba Phambili Ehamba Phambili Emhlabeni)
Iphrinta ehamba phambili ehamba phambili emakethe
Iphrinta ye-UV Flatbed isetshenziselwa ukuphrinta izithombe kunoma yiluphi ulwazi ngokuqondile, futhi ingakwazi ukuyingxenye yezithombe zokudweba ngezandla nganoma yiluphi ulwazi, futhi lingashesha ijubane, futhi lingakunika izwe elihle. Ungayithatha ukuhlobisa igumbi lakho lokuphumula, ikamelo lakho lokulala, ikamelo...
Iphrinta elincane elincane le-UV
Imikhiqizo yethu eyinhloko, ungasebenzisa i- Best Small UV Printer ukuphrinta noma iyiphi isithombe oyifunayo kunoma iyiphi impahla, isibonelo isithombe sakho somndeni. Indawo yokunyathelisa yomshini ejwayelekile ingama-60 * 60cm, futhi ungakwazi ukwengeza imilayezo ehamba phambili, uma ufaka isitimela esisodwa,...
Iphrinta iphrinta ye-UV ephrintiwe
Faka iphrinta ye-UV iphrinta ephrintiwe ku-van yakho noma ungene, bese usebenzisa le moto ukuphrinta izithombe kunoma iyiphi impahla, ukwenza imidwebo futhi wenze imali. Isixazululo salesi printer singcono kakhulu singaba ngu-1400DPI, umshicileli wokuhleka kumnandi, ubukeka sengathi ungokoqobo. Kuyabiza imali,...
I-RFC i-Arizona R1390 i-Printer Flatbed
Singumama we-EPSON, ngakho-ke i- RFC Arizona R1390 UV Flatbed Printer inekhwalithi efanayo noma engcono kune-EPSON. Iyakwazi ukuphrinta efonini yefoni, amathayili e-ceramic, ingilazi, ingubo, izinkuni, i-ect. Isithombe osinyathelisa singadlula iminyaka engaphezu kwengu-10 ephikisana ne-UV nemvula. I-RFC i-Arizona...
Ama-printer aphansi angaphansi kwe-UV
Ufuna ukwenza isithombe somndeni bese usibeka eludongeni? Sebenzisa ama-printer aphansi e-UV Ungaphrinta isithombe sakho somndeni ngesinqumo esiphezulu ngokuqondile hang udonga, futhi isithombe esicubungayo sizobukeka sengathi si-3-dimentional, sinobuciko futhi sihle. Ngiyakwazi ukukuthumela amanye amavidiyo...
Iphrinta ye-Desktop UV esebenzayo ingaphrinta noma iyiphi isithombe eqondiswe kunoma yikuphi okubonakalayo, iphrinta ye- Desk UV Inkjet Printer , kodwa ingaphrinta kwenye indawo, njengeglasi, ingubo, amathayili we-ceramic, amathiko, i-ect. Kungaphrinta noma yimuphi umbala kodwa umhlophe, ngakho uma udinga ukuphrinta...
I-Digital Flatbed LED UV Printer
I-RFC Digital Flatbed LED UV UV Printer ithatha uhlelo lwe-computer-control system. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-USB. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, isithombe singaqondisa kunoma iyiphi impahla, futhi isithombe singadlula iminyaka engaphezu kwengu-10 imelana ne-UV nemvula....
Umshini wokunyathelisa we-Digital Flatbed
I-RFC UV Printer Flatbed ithatha uhlelo lokulawula ikhompiyutha yama-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-USB. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge: landscape, uhlamvu, imidwebo yendabuko yaseShayina, imidwebo yamafutha, imidwebo engenasici, ikhalligraphy kanye nemidwebo,...
Iphrinta ye-Digital UV ephathekayo I-UV 4060 Price
Iphrinta ye-UV Flatbed isetshenziselwa ukuphrinta izithombe emdongeni ngokuqondile, futhi ingenza esikhundleni sezingxenye zemidwebo yezithombe ngesandla ngesandla nanoma yikuphi ukwaziswa, futhi ingaba ijubane, futhi ingakunika izwe elihle. Ungayithatha ukuhlobisa igumbi lakho lokuphumula, ikamelo lakho lokulala,...
Iphrinta ye-Digital UV ephathekayo UV6090
Iphrinta ye-UV Inkjet ingasebenzisa umhlobiso wekhaya, ezitolo zezimakethe, isikole, ihhovisi, njll ukuhlobisa, akunakukwazi ukwenza ngokuzenzakalelayo isithombe sokuklama noma amagama kunoma yiluphi ulwazi ngokusho komthengi ohlukile bonke ngabo, i- Digital UV Flatbed Printer UV6090 ingakunikeza izwe elimibalabala....
Umshini wokunyathelisa we-Digital UV Flatbed
Umshini wokunyathelisa we-Digital UV Flatbed usetshenziselwa ukunyathelisa izithombe kunoma yikuphi okuqukethwe ngqo, futhi kunokuba ube yingxenye yezithombe zokudweba ngezandla nganoma yiluphi ulwazi, futhi lungashesha ijubane, futhi lingakunika izwe elimangalisayo. Ungayithatha ukuhlobisa ikhaya lakho, indawo...
Iphrinta ye-UV esebenzayo ye-DIY
Umshini wokuphrinta we-UV Flatbed uthola uhlelo lokulawula ikhomputha le-multi-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe (design) zifakiwe kukhompyutha, zingaphrinta kunoma yiluphi ulwazi ngqo. Ezifana: i-portrait, landscape, i-oli, i-ink, i-calligraphy, imidwebo yemidwebo, njll....
I-Docan UV Flatbed Digital Printer
Namuhla, abantu abaningi bayaphishekela ubuntu, bafuna ukuhlobisa izindawo ezizungezile ngokuvumelana nezithakazelo zabo. Iphrinta ye-Docan UV Platinum yenzelwe futhi igcwalise lezi zimfuno, i- Diy Uv iphrinta ingenza ubuntu bube khona imidwebo yezinto ezibonakalayo ngaphandle kohlobo lwezintandokazi , uhlobo...
Iphrinta Ehamba Phambili Ehamba Phambili Emhlabeni Iphrinta ehamba phambili ehamba phambili emhlabeni Iphrinta ehamba phambili ehamba phambili Iphrinta ye-Cake ehamba phambili Iphrinta yamakholi efoni e-Malaysia Iphrinta encane ye-UV encane ehamba phambili 2017 Iphrinta yeThijithali yeDrama yeDitrikhi yokudayiswa Iphrinta Enamandla